BWC074 - Fakan-tsarimihetsika Mini maivana amin'ny vatana [No LCD Screen] - Vahaolana OMG
12 ora eo ho eo ny fiainam-pivoarana feno 720P - Noho ny vahaolana H22 ambany ny fahombiazan'ny fampiasana herinaratra. Ity fitaovana ity dia mampifandanja betsaka ny fiainana sy ny haben'ny fakan-tsary. Arak'izany dia afaka mandray an-tsoratra 12 ora maharitra bateria fandraketana!
LCD eo an-tampony - LCD kely eo an-tampony mba hanondroana ny fitehirizana, ny bateria, ny toe-peo, ny WIFI.
Azafady mba jereo ny fampitahana eo amin'ny famatrarana horonantsary H.265 & H.264 toy eto ambany:
Fil firaketana e
Ny haben'ny rakitra
/ isan'ora (GB)
Ny horonan-tsary H.265 dia efa ho antsasaky ny horonantsary H.264, izay manondro fa ny mpampiasa dia afaka mampiasa karatra SD 32GB hampiasaina ho karatra SD 64GB.
7561 Total Views 2 Views Today